Ti2SnC ceramics irudzi rutsva rwechimiro ceramics ine yakasarudzika dhizaini dhizaini inogona kugadzirwa. Iyo ine zvese zvakanakisa zvivakwa zvesimbi uye ceramic. Zvakafanana nesimbi, ine zvakanakira kunaka kwemagetsi uye kupisa kwekushisa, machinability, yakanyanya kukuvara kushivirira uye kupisa kwemhepo kushamisika
Ti2SnC ceramics irudzi rutsva rwechimiro ceramics ine yakasarudzika dhizaini dhizaini inogona kugadzirwa. Iyo ine zvese zvakanakisa zvivakwa zvesimbi uye ceramic. Zvakafanana nesimbi, ine zvakanakira kunaka kwemagetsi uye kupisa kwemagetsi, machinability, yakanyanya kukuvara kushivirira uye kupisa kwemhepo kushamisika. Zvakafanana nekeramiki, ine yakakwira modulus yekusimba, yakanyanya kupisa tembiricha, oxidation kuramba uye ngura kuramba. Zvichienderana nezvakataurwa pamusoro apa, Ti2SnC ceramics inogona kushandiswa zvakanyanya sematrikisi kana kusimbiswa mukubhururuka, muchadenga, zvombo nemidziyo, indasitiri yenyukireya, ruzivo rwemagetsi uye mamwe masosi epamusoro. Kunyangwe Ti2SnC ceramics ine yakanakisa yakazara zvivakwa uye yakafara yekushandisa tarisiro, kugadzirirwa kwechinhu ichi kwakaoma uye kuchena kunonetsa kudzora, saka kushandiswa kweTi2SnC ceramics kune mashoma. Sezvakatsanangurwa muzvinyorwa (J. Am. Ceram. Soc. 96, No. 10, 2013),
Ti2SnC ceramics ine FexSny, Sn uye TiC zvakawanikwa nekutora Fe seye sintering mubatsiri mumiriri uye inopisa-yekutsikirira chinhu inosanganisa poda pa1150 ° C uye 50 MPa ye10 h.
Sezvakatsanangurwa mumabhuku (J. Am. Ceram. Soc. 99, No.7, 2016), Ti, Sn uye graphite zvakashandiswa sezvinhu zvakasvibirira uye zvakadhirowewa pa1600 ° C muhubhu yevira ine argon mhepo ye4 h kuwana Ti2SnC ceramics ine Sn uye TiC tsvina. Iyo nzira yekugadzirira yakatsanangurwa pamusoro apa ine nguva refu yekupisa, uye tsvina TiC neFexSny inogadzirwa zvinonetsa kubvisa, izvo zvine mhedzisiro yakaipa kwazvo pazvivakwa zveTi2SnC ceramics.
Naizvozvo, iko kugadzirira kwekuchena kwakanyanya Ti2SnC ceramics yakakosha mukukosha kwekushandisa kwakawanda kweichi chinhu. Parizvino, iko kugadzirira kwekuchena kwakanyanya Ti2SnC ceramics haina kutaurwa pachena.
Pashure: Aluminium titanium carbide, Ti2AlC
Zvadaro: Nesilicon Titanium Carbide, Ti3SiC2